Sida uu u dhacay weerarka Paris oo qoraal ah - BBC Somali
Sida uu u dhacay weerarka Paris oo qoraal ah
Image caption Baaritaan adag oo ka socda goobaha ay weerarada ka dheceen ee Paris
Waxa uu ahaa weerarkii ugu xumaa ee ka dhaca Faransiiska tan iyo markii uu dhamaaaday Dagaalkii Labaad ee Adduunka. Halkan ka akhriso faahfaahinta weerarka paris iyo sida ay wax u dhaceen
12: 31 SGA: Madaxweynaha Faransiiska ayaa ballan qaaday in amniga dalkaasi la adkeynaayo, wuxuuna xaqiijiyay in Faransiiska aysan joojineynin dagaalkeeda ka dhanka ah "argagixisada".
12: 20 SGA: Xiriirka kubadda cagta ee Yurub ee UEFA ayaa argagax ku tilmaamay weerarada Paris ee sababay geerida in kabadan 128 qof.
12:16 SGA: Calanka Faransiiska ee safaaradda ay ku leeyihiin Shiinaha oo kala bar hoos loo dhigayaa, sida safaaraddaasi laga sheegay.
12:13 SGA: Muftiga muslimiinta Suniyiinta caalamka ayaa "naceyb xun" ku tilmaamay weerarada Paris oo uu cambaareeyay.
12:09 SGA: Faransiiska ayaa lagu eedeynayaa in sirdoonkoodu uu "fashilmay", sida xisbiga mucaaradka ee dalkaasi uu sheegayo.
Image caption Askar ku sugan jidadka magaalada Paris oo amniga sugaya
12:05 SGA: Dhammaan kulamada ciyaaraha maanta iyo beri ka dhici lahaa Paris ayaa sidoo kale la hakiyay.
11:57 SGA: Ciyaar ay kooxda horaalka ah ee Glascow oo ku yeelan lahayd magaalada Paris ayaa dib loo dhigay sida lagu sheegay barta Twitter ka ee kooxda Scotland ka dhisan.
11:55 SGA: Dhimashada ayaa la sheegaya in hadda ay ka badan tahay 128 qof oo badankooda ku dhintay baarka ay ka socotay xafladda miyuusikada.
11:50 SGA: Dhammaan boorsooyiinka iyo gawaarida waxa saaran ayaa lagu amray ciidamada xuduudaha inay baaraan, si ay u ogaadaan waxa saaran.
Image caption Militariga Faransiiska oo howlgal ku jira
11:45 SGA: Sawir gacmeed laga sameeyay Paris oo lagu dalbanaayo nabadda iyo amniga caasimadda Faransiiska oo xalay weeraro kala duwan ay ka dheceen.
Image caption Nabadda Paris
11:41 SGA: Bulshada Muslimiinta ah ee ku nool Faransiiska ayaa waxa ay cambaareeyeen weerarada Paris.
11:36 SGA: Qasaaraha dhimashada ee weerarka Paris waxa ay gaartay 127 qof, 180 dhaawac oo 80 xaaladoodu ay aad u liidato, sida dowladda sheegtay.
11:35 SGA: Hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa kulan degdeg ah isugu yeertay wasiiradeeda si ay uga arrinsadaan xaaladaha amniga kaddib weeraradii Paris.
11:33 SGA: Iyadoo hadda subax ay u tahay magaalada Paris, weli dad badan ayaa la geynayaa cisbitaalada.
11:23 SGA: Dad ayaa bilaabay inay ubaxyo dhigaan goobihii dadka lagu laayay ee Paris.
Image caption Dad ubaxyo dhigaya goobihii la weeraray
Image caption Ubaxyo yaalla meelaha dadka lagu laayay
11:17 SGA: Ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa cambaareeyay weerarada Paris, wuxuuna sheegay in dagaalka wadajirka ah ay ka caawindoonaan Faransiiska.
11:10 SGA: 1,500 oo askeri oo dheeraad ah ayaa la geeyay iskuulada, jaamacadaha iyo goobaha dadweynaha ee magaalada Paris ee dalka Faransiiska kaddib weerarada ay ku dhintaan inkabadan 120 qof.
11:05 SGA: Garoomada diyaaradaha, iyo dekadaha iyo xuduudaha Faransiiska dhammaan waxaa la geeyay ciidamo hor leh oo baaraya dadka galaya ama kabaxaya dalkaasi.
10:56 SGA: Garoonka ciyaarta ay ka socotay ee la weeraray waxaa ku sugnaa madaxweynaha Faransiiska oo ciyaartaasi saaxiibtinimo daawanaayay.
Image caption Madaxweynaha Faransiiska oo weerarada kaddib si weyn loo ilaalinaaya
10:51 SGA: Taliyaha ciidamada magaalooyiinka waaweyn ee Faransiiska, Mark Rowley, ayaa sheegay in saaka xaaladda dib u eegis lagu sameyndoono kaddib markii ciidamada fiijignaan dheeraad ah la geliyay kaddib weerarada Paris.
Image caption Nin ku dhaawacmay mid ka mid ah weerada oo la daaweynaayo
10:43 SGA: Magaalada New York ayaa ciidamo dheeraad ah la geeyay amnigeedana la adkeeyay kaddib weeraradii Paris.
10:39 SGA: Waxaa soo baxaya warar sheegaya in 153 qof ay ku dhinteen weerarada laakiin dowladda Faransiiska 120 qof ayey xaqiijisay.
10:32 SGA: Todobo ka mid ah sedeeda qof ee weerarka qaaday way isqarxiyeen, halka midka kale booliska ay toogteen. seddax kamid ah waxay isku qarxiyeen garoonka ay ka socotay ciyaartii saaxiibtinimada ee Faransiiska iyo Jarmalka.
Image caption Weerarada waxay ka dheceen dhimayaashan dhexdooda.
10:27 SGA: David Camero, Ra'iisul wasaaraha Britain ayaa weerarada Paris ku tilmaamay wax laga argagaxo, asigoo kulminaya ciidamada amniga ee loo yaqaano COBRA ee UK si arrimaha amniga uu ugala tashado.
10:21 SGA: Afar ka mid ah dableyda weerartay Paris waxaa lagu dilay goobta ay ka socotay xafladda Miyuusikada ee ah meesha ay dadka ugu badan ku dhinteen.
10:17 SGA: Sawirada baark la weeraray ee dadka ugu badan ay ku dhinteen oo boolis ay gudaha u galeen.
Image caption Boolis baaraya gudaha Baarka
Image caption Nin laga soo badbaadiyay baarka gudihiisa
10:13 SGA: Intabadan kooxda weerarka qaaday way isqarxiyeen, sida laamaha amniga ee Faransiiska ay sheegayaan.
10:10 SGA: Madaxweynaha Faransiiska oo qabtay kullan gaar ah oo arrimaha amniga ku saabsan kaddib weerarada Paris.
10:05 SGA: Madaxda Ruushka iyo Iiraan ayaa si wada jir ah u dalbaday in dagaalka ka dhanka ah "argagixisada" dhinac looga soo jeesto oo la iska kaashado.
10: 02 SGA: Dadka dhintay badan kooda waxaa loo toogtay mid mid kaddib markii koox hubeysan ay meel ku xareysteen.
10:00 SGA: Ugaarsiga dad looga shakisan yahay inay caawinayeen kooxda weerarada Paris qaaday oo si rasmi ah uga bilowday Faransiiska.
09:57 SGA: Tirada dhimashada oo weli laga cabsi qabo inay badato ayaa ah in kabadan 120 qof. dhaawacana wuxuu kor u dhaafay 200 oo qof.
Image caption Dadkii la badbaadiyay oo laga kexeeyay nawaaxiga goobta weerarka
09:53 SGA: Dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in haddii weerarka ay lug ku yeeshaan kooxda la baxday Khilaafada Islaamka ay adkaaneyso sidii kooxdaa looga adkaan lahaa.
09:49 SGA: Madaxweynaha Kenya oo sheegay in dhibaatadaas oo kale ay haysato ayaa tilmaamay in tallaabo adag loo baahan yahay in la qaado.
09:45 SGA: Halkan ka dhageyso falanqeyn ku saabsan weerarada Paris oo uu ka hadlaayo Dr Sacad Sheekh Cusmaan.
09:43 SGA: Wakaaladda wararka ee Iiraan ayaa sheegtay in dal ahaan ay sidoo kale dhibane u yihiin weerrada "argagixisada" mana aysan sharixin sababta Madaxweyne Ruuxaani u joojiyay safarkiisa Yurub.
09:40 SGA: Ruushka iyo Kenya ayaa cambaareynta weerarada Paris ku biiray waxayna ku tilmaameen dhibaato lagu qaaday aadanaha.
09:35 SGA: Madaxweynaha Iiraan ayaa joojiyay safar uu ku tagi lahaa dalalka Faransiiska iyo Taliyaaniga kaddib weerarada Paris ee ay ku dhinteen in kabadan 120 qof.
09:28 SGA: Dhaqdhaqaaqa xuduudaha Faransiiska ayaa la yareeyay, dadka ka gudbayana si adag ayaa loo baarayaa, sida warbaahinta dalkaasi ay ku warameyso.
09:25 SGA: Dacwad oogayaasha Faransiiska waxa ay sheegayaan inay suuragal tahay in weli ay "argagixiso" ku dhex dhuumanayaan Faransiiska.
09:21 SGA: Ra'iisul wasaaraha Britain ayaa waxa uu qabanayaa kullan degdeg ah oo laamaha amniga ay ka qeybgalayaa, taas oo jawaab u ah weerarkii "argagixiso" ee Paris lagu qaaday.
09:17 SGA: Baarayaal heer sare ah ayaa goobaha weerarada ay ka dheceen la geeyay, waxayna baarayaan hubka iyo faraha kooxda weerarka looga shakisan yahay.
Image caption Khubarada baareysa goobaha weerarada
09:15 SGA: Dadka ka faalooda arrimaha amniga waxa ay sheegayaan in weerarkan uu la mid yahay kuwa ay fuliyaan kooxaha ka dagaallamaya Suuriya iyo Ciraaq.
09:12 SGA: Faransiiska sanadkan waxaa ka dhacay weeraro aad u halis ah oo lagu eedeeyay "argagixiso" sida gooxda la baxday Khilaafada Islaamka.
09:10 SGA: Waxaa laga cabsi qabaa in tirada dhimashada ay ka badato 140 qof.
Image caption Nin meel qashinka lagu shibo ku dhuumanaya intuu weerarka socday
08:59 SGA: Dagaalyahano u dhashay dalalka Reer Galbeedka ayaa ka barbar dagaallamaya kooxaha ku sugan Bariga dhexe iyo Soomaaliya.
08:55 SGA: Dalal ay Shiinaha ka mid tahay waxa ay ballan qaadayaan in Faransiiska ay la wadaagi doonaan warkastoo la xiriira weerarada ay Argagixisada qorsheynayaan.
08:52 SGA: Dalal badan oo daafaha caalamka ku kala yaalla ayaa amnigooda la adkeeyay, Mareykanka ayaana ka mid ah.
08:42 SGA: Madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa weerarka Paris ku tilmaamay ficil ka dhan ah aadanaha.
08:37 SGA: Baaritaan qof qof ah ayaa Paris ka bilowday sida warbaahinta dalkaasi ay ku warramayaan.
Image caption Nin dhulka jiifo oo boolis ay baarayaan aqoonsigiisa
Image caption Dhaawacyada oo weli la uruurinaayo
08:36 SGA: Boqortooyada Sucuudiga ayaa cambaareysay weerarada Paris.
08:34 SGA: In kabadan 80 ka mid ah dadka weerarada ku dhintay waxay ku sugnaayeen meel ay ka socotay xaflad miyuusik.
08:32 SGA: Inkabadan 15 kun oo askeri ayaa gudaha u galay magaalada Paris. dadkana waxaa loo sheegay inaysan guryahooda ka soo bixin.
08:30 SGA: Weeraradan xalay ka dhacay Paris waxa ay imaanayaan 10 bilood ka dib weerarkii lagu qaaday wargeyskii Charlie Hebdo, iyo maalin kaddib markii Mareykanka uu sheegay inuu weeraray Jihadi John.
Image caption Madaxweynaha Faransiiska oo ku sugan Bataclan oo ah meesha weerarada ka dheceen
08:27 SGA: Madaxweynaha Faransiiska oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay inay dagaal la gali doonaan "argagixisada".
08:25 SGA: Ra'iisul wasaaraha Pakistan Mohamed Nawaz Shariif ayaa si adag u cambaareeyay weerarka Paris.
08:20 SGA: Dadkii ka badbaaday weerarada ayaa waxa ay bilaabeen inay ehelladooda raadiyaan.
Image caption Nin kabadbaaday weerarka
Image caption Ehello iyo saaxiibo dib u kulmaaya
Image caption Dadka ka badbaaday weerarka
08:13 SGA: Baarayaasha Faransiiska waxay bilaabeen inay baaraan aqoonsiga kooxda weerarka ka dambeysay.
Image caption Waa militari ku dhex sugan magaalada oo dhan
08:09 SGA: Magaalada Paris ayaa waxa ay noqotay meel ay buuxdhaafiyeen ciidan, aadna amniga waaloo adkeeyay nawaaxiga Magaalada.
08:06 SGA: Madaxweynaha Shiinaha ayaa sheegay inuu diyaar u yahay in Faransiiska ay kala shaqeeyaan la dagaallanka "Argagixisada".
08:04 SGA: Madaxweynaha Mareykanka Obama ayaa weerarkaasi ku tilmaamay ficil waxshinimo oo rayidka lagu argagixinaayo.
08:02 SGA: Majirto cid sheegatay weerarkaasi, laakiin waxaa farta lagu fiiqayaa xagjiriin Islaamiyiin ah.
Image caption Garoonka uu weerarka ka dhacay
07:58 SGA: Tirada dhimashada ayaa la sheegayaa inay sare u sii keceyso, 200 oo qof ayaana ku dhaawacantay, 80 ka mid ah xaaladooda aad bay u liidataa.
07:56 SGA: New York, Boston iyo magaalooyiin kaloo ku yaalla Mareykanka ayaa amnigooda aad loo adkeeyay weerarka Paris ka dib
07:54 SGA: Weerarkan waa kii ugu dhimashada badnaa ee Faransiiska ka dhacay tani iyo dagaalkii labaad ee Dunida
Image caption Askar kormeereysa magaalada Paris
07:51 SGA: Jidadka Magaalada Paris ayaa waxaa ka bilowday baaritaan iyadoo dalka oo dhan la geliyay xaalad degdeg ah.
07:48 SGA: Sideed qof oo looga shakisan yahay weerarkii Baris ayaa la dilay, waxaa kaloo bilowday ugaarsiga dadkaloo laga shakisan yahay inay kooxdaasi caawinayeen.
07:45 SGA: Baliiska dalka Faransiiska ayaa sheegay in ugu yaraan 100 qof ay ku dhinteen weeraro isxig-xiga oo ka dhacay caasimada Paris. Halkan kala soco wararkii ugu dambeeyay.
05:50 SGA: Seddax kamid ah dablayda way is qarxiyeen halka midka afaraadna la toogtay
05:20 SGA: Booliska waxa uu sheegay in dhamaan raggii ku lug lahaa qaraxyada iyo rasaasyanta ay dhinteen.
Image caption Madaxweyne Hollande oo gaaray tiyaatarka la weeraray oo 100 qof ay ku dhinteen
04:20 SGA: Belgium waxay sheegtay in ay adkaysay xadkeeda kadib weerarka Paris.
04:07 SGA: 1,500 oo askeri ayaa la geeyay caasimadda Paris kadib weerara sababay dhimashada in ka badan 100 qof.
Image caption Boolis ku qulqulaya cawayska Bataclan
04:03 SGA: Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in dhamaan iskuulada iyo jaamacadaha Paris la xiri doono barito.
Illaa iyo hadda waxaan oghnahay:
Ugu yaraan140 qof ayaa lagu dilay weeraro lo adeegsaday rasaas iyo qarxyo ka dhacay dhowr meelood oo caasimadda Paris ah
100 qof oo ka mid ah dadkaasi waxa ay ay ku dhinteen goobta acwayska Bataclan.
Weerarada kale waxa ay ka dhaceen garoonka kubadda cagta ee Paris iyo muqaayad ku taalo waqooyiga Paris
Faransiiska waxaa looga dhawaaqay xaalad deg deg ah, xaduudaha dalkane waa la xiray.
Dadweynaha Paris waxaa loo sheegay inaysan guryahooda ka bixin.
Image caption Haweeney dhaawac ah
03:49 SGA: Qaar kamid ah shirkadaha diyaaradaha Maraykanka ayaa dib u dhigay duulimadyadii ay ku tagi lahaayeen Paris.
03:37 SGA: Tirada dhimashada ee illaa iyo hadda la ogyahay waa 140 qof. Goobta cawayska ee Bataclan oo kali ah 100 qof ayaa ku dhimatay, halka 40-ka kalena ay ku dhinteen goobo kala duwan.
Image caption qaar kamid ah dadkii ka soo abxsaday afduubka Bataclan
03:30 SGA: Weriye ka tirsan BBC-da oo joogto agagaarka goobta cawayska ee Bataclan ayaa sheegtay in haddii la xaqiijiyo in 100 qof ay ku dhinteen goobtaasii oo kali ah ay noqon doonto xaqiiqo kharaar oo Faransiiska u baahnyahay in uu liqo.
03:20 SGA: Wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in 100 qof ay ku dhinteen goobta cawayska Bataclan oo dablay hubaysan ay dad afduub ugu haysteen- Reuters.
Lahaanshaha sawirka Elysee
Image caption Gollaha Wasiirada Faransiiska oo galay shir deg deg ah.
Image caption shaqaalaha gurmadka deg-dega oo dadka dhaawac ah ka saaray cawyska Bataclan
03:19 SGA: Madaxweyne Hollande ayaa baajiyay safar uu ku tagi lahaa Turkiga si uu uga qaybqaato kullan madaxeedka G20.
03.14 SGA: TV laga leehay Faransiiska BFM TV ayaa ku waramay in baliiska howlgalada gaarka ah ay dileen 2 kamid ah dablaydii dadka afduubka ugu haystay goobta cawayska ee Bataclan. Faahfaahin intaa dheer lama sheegin.
03:10 SGA: Masuuliyiinta Maraykanka waxa ay sheegeen in ay aaminsanyihiin in weerada Paris ay yihiin kuwa la soo agaasimay
03:05 SGA: Booliska waxa uu sheegay in uu soo idlaaday howlgal ay ku doonayeen in ay ku soo furtaan dadkii lagu haystay Bataclan-Reuters
Image caption Baliis dheeraad ah ayaa gaaray Bataclan
02: 55 SGA: Baliis dheeraad ah ayaa gaaray Bataclan oo illaa 100 afduub loogu haysto
02:50 SGA: Weerarka ugu wayn waxa uu ka dhacay xarunta Bataclan oo markaasi lagu daawanayay riwaayad.
02:44 SGA : Obama waxa uu sheegay in weeraradaasi looga gol leehay in lagu argagixiyo dadka rayidka ah.
02:41 SGA: Mid kamid ah dadkii ku sugnaa goobta lagu caweeya ee Bataclan ayaa BBC-da u sheegay in rag hubaysan oo ku qaylinaya ''Allaahu Akbar'' ay soo galeen dhismaha. wuxuu sheegay in uu arkay maydadka 15 qof.
Image caption mid kamid ah weerarada Paris waxa uu ka dhacay garoonkan oo cayaar saaxiibtinimo ay ku daxmaraysay France iyo Germany.
02:40 GSA: Dadweeynaha Paris waxaa loogu baaqay in ay guryahooda ka soo bixin.
02:37GSA: Baliiska ayaa sheegay in ugu yaraan 2 qof ay isqarxisay. Waxaana bambaano lagu tuuray garoonka cayaaraha Paris oo ay markaasi ka socotay cayaar saaxiibtinomo oo dhaxmaraysay kooxaha qaranka Farnsiiska iyo Jarmalka.
02:33 SGA: Qaraxyo dheeraad ah ayaa laga maqlayaa mid kamdi ah goobaha la weeraray Bataclan oo illaa 100 qof ala aaminsanyahay in afduub loogu haysto.
02:30 SGA: Madaxweynaha dalka Faransiiska Hollande ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah, waxaana la xiray xaduudaha dalka Faransiiska.
Image caption Hollande oo uu ay ka muuqata argagax ayaa la hadlay qaranka
02:20 SGA: Rasaas iyo qarxyo ayaa ka dhacay qaybo kamid ah magaalada Paris.